TOP 10 POKEMON Egwuregwu n'ihi na android
Na-esote Mario franchise na Pokemon franchise na-kweere na-nke abụọ kasị ewu ewu franchise maka egwuregwu. Games si usoro isiokwu a na-mepụtara na e site Game freak & e kere eke inc ..-adịkarị, egwuregwu na-na ụzọ na slighter esemokwu ma na ahụ soro ka afọ ụfọdụ nke mbụ ntọhapụ, a dị ịrịba ama remake na ẹkenam. Usoro isiokwu a nke egwuregwu dị ukwuu n'ime ihe Njije mgbaghoju anya na dijitalụ Pita Ụfọdụ nke ọma mmasị Pokemon egwuregwu n'ihi na Android, site usoro isiokwu a na-ebe a na ederede n'okpuru. Ụfọdụ n'ime egwuregwu na-eri gị ihe ọ bụla na-achọta free pokemon Android egwuregwu ngalaba nke play ụlọ ahịa na Amazon wdg mgbe, ndị ọzọ na-ego achọ ma ọ bụghị kwa elu-agbaji gị akụ.
1. Terapets 2 enwetaghị Epic Monsters
Nke a bụ otu n'ime ihe ndị kasị hụrụ n'anya Pokémon egwuregwu. E nwere ngụkọta nke 300+ nnukwu anụ na ihe fọrọ nke nta dokwara ọnụ ọgụgụ nke dungeons, ịlụ ọgụ, evolutions, nsogbu wdg Ọtụtụ narị nke ọhụrụ ọgụ e kwukwara na egwuregwu a. Na nkenke, ọ bụ nanị ịtụnanya.
Egwuregwu a na-nwere ọtụtụ narị nnukwu anụ. Niile i nwere ime bụ enwetaghị ha na-achọpụta na ha pụrụ iche na àgwà. Na egwuregwu a, na àgwà ndị isii na ole ya bụ ọkụ, ụwa, mmiri, ikuku, nsọ na ọchịchịrị. Abụọ weghaara nnukwu anụ nwekwara ike jikọtara na-etolite a ike ọhụrụ. Agha na egwuregwu na-gburugburu ụwa. Ndịna-emeputa nke egwuregwu a e enyocha dị ka mara mma.
3. Monster ije
Na egwuregwu a, na Pokémon Fans nwere ibu agha ndị iro ha mgbe enyi mere na nnukwu anụ nke dị iche iche na-eme. Ha nwetara iji ike ha nakwa dị ka ike nke ndị enyi ha na nnukwu anụ ha anakọtara na ụzọ ha na-alụ ọgụ nkịtị iro. Ịlụ ọgụ pụkwara mere na ndị enyi gị. Ọ bụ ihe niile banyere ihe ịma aka, ọgụ na evolving.
4. aji Monster
E nwere ngụkọta 150 nnukwu anụ na egwuregwu a nke nwere na-ma weghaara, zụọ ma ọ bụ agha. E wezụga na-egwuri egwu enyi, ọ pụkwara-egwuri na ndị ọzọ online ọrụ. The creators nke egwuregwu a na-anya isi nke mfe ọrụ interface.
5. Terapets 1 kụrie Anu ulo Monsters
Ọ bụ a fun egwuregwu nke na-aghaghị iji na-enweta sonyere ekirikarị na ya n'ihi na ogologo ugboro. Ọ na-abịa ala ị na-ahọrọ ogologo anu. Mma oke bụ, mma gị Ohere nke lanarị ịga nke ọma. Ọzọ, o nwere 300+ nnukwu anụ na banyere 3 iri na abuo ụdị. E nwere ngụkọta nke 100 etoju ma na ihe karịrị 250+ ọgụ.
E nwere ihe karịrị otu narị etoju na egwuregwu a. Na-jide nke ego bụ buturu siri ike. Monsters ugbu na-na otu narị otu narị nke nọmba mgbe ndị ọcha ma ọ bụ na-eme na-asatọ. E nwere ọtụtụ eri ahụ atụmatụ dị ka a n'ọkwá ndorondoro nke pitches ọtụtụ egwuregwu gburugburu ụwa.
7. Monster Ebu
Na egwuregwu a, ị nwere ike igwu egwu na enyi atọ na oge. Echefu ihe ọ bụla ọzọ ma ọ bụrụ na ị ebudatara egwuregwu a dị ka ọ bụ kwa-eri ahụ na nwere ngụkọta nke ọtụtụ puku nnukwu anụ nke nwere na-weghaara na azụ.
5 agwaetiti, 16 dike na 300 etoju, ndị a bụ ihe gburugburu nke egwuregwu ebute. Ndịna-emeputa bụ ịtụnanya.
9. Na Monsters 2
I nwetara kpọghee nzuzo nke Afer. Ọgụ na-eme na ìgwè ndị na 3, 200 nnukwu anụ nwere na-weghaara na azụ. Ọgwụgwụ zubere bụ ime ka zuru ezu udo dị n'ala nke Afer.
10. Dike Monsters
Ị ga-abụ onye kasị ukwuu ogologo anụ ọzụzụ na egwuregwu a site akụta ndị ọjọọ nnukwu anụ. Ọzọ na-agụnye-emecha dị iche iche ihe ịma aka maara dị ka 'quests' nakwa chọpụtara ọhụrụ isuo. Ọzọkwa, ị pụrụ ikori na ndị enyi gị.
> Resource> emulator> Top 10 Pokemon Games maka Android